Megestrol acetate အမှုန့်အဘို့အဆုံးပြီးပြည့်စုံသောနိဒါန်း | AASraw
Megestrol acetate အမှုန့်အဘို့အဆုံးပြီးပြည့်စုံသောနိဒါန်း
/သတင္းေၾကျငာခ်က္/Megestrol acetate/Megestrol acetate အမှုန့်အဘို့အဆုံးပြီးပြည့်စုံသောနိဒါန်း
အပေါ် Posted 07 / 01 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Megestrol acetate. ဒါဟာရှိပါတယ်0မှတ်ချက်.
Megestrol acetate အမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကို
1.Megestrol acetate သုံးသပ်ချက်များ (CAS: 595-33-5)
2.How Megestrol acetate အလုပ်ပါသလား
3.How အကောင်းဆုံးခေါ်ဆောင်သွား megestrol acetate အမှုန့်ဖြစ်သနည်း
megestrol acetate အမှုန့်ကိုယူပြီးခင်မှာအထူးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ 4.What?
5 ။ အဘယ်သို့ငါ megestrol acetate အမှုန့်ကိုယူသင့်သနည်း
တိကျတဲ့လူဦးရေအတွက် 6.Use Megestrol acetate Powder
7 ။ ငါသည်ဤဆေး၏သိုလှောင်မှုနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာကိုသိသင့်သနည်း
8.Megestrol acetate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
အလေးချိန် Gain များအတွက် 9.Megestrol Acetate အသုံးပြုမှုသေသေချာချာစဉ်းစားသင့်
10.What ငါ Megestrol Acetate အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိသင့်အရေးကြီးဆုံးသတင်းအချက်အလက်များပါသလဲ
11.Where ငါ Megestrol Acetate အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအရနိုင်မလဲ?
Megestrol acetate အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
I.Megestrol acetate အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: Megestrol acetate အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 244-246 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp: အခန်းအပူချိန်
1 ။ Megestrol acetateသုံးသပ်ချက်များ (CAS:595-33-5)
Megestrol acetate အမှုန့်ဟော်မုန်းကုသမှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစမီဂါမြို့သို့မဟုတ် megestrol (ဟုခေါ်သည်595-33-5) ။ ဒါဟာဟော်မုန်းအဓိကချို့ယွင်း၏ဗားရှင်းကိုဖန်ဆင်းသူဖြစ်၏။ ချို့ယွင်းသောကိုလည်း၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုထုတ်လုပ်အမျိုးသမီးဟော်မုန်းပေမယ့်လူတို့သညျတစျဦးဖွစျသညျ။
Megestrol acetate အမှုန့်ပြန်လာဒါမှမဟုတ်သူတို့စတင်ရှိရာကနေဖြန့်ရပြီကြောင်းအောက်ပါကင်ဆာများအတွက်ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအစဆင်းရဲသားကိုအစာစားချင်စိတ်များအတွက်ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဆရာဝန်ကိုသင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်ဆာသို့မဟုတ်ယင်း၏ကုသမှု၏အလေးချိန်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြလျှင်သင်ကယူအကြံပြုပေလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်များလည်းသူတို့ရဲ့ကင်ဆာသို့မဟုတ်ယင်း၏ကုသမှုကြောင့်ပူထှကျသှားရှိသည်သောမိန်းမတို့အဘို့ကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုရန်ပေလိမ့်မည်။
2 ။ ဘယ်လိုမျိုး Megestrol acetateအလုပ်မလုပ်?
Megestrol acetate ဟော်မုန်းကုထုံးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းဟာသွေးကြောထဲဝငျမြားနှငျ့အခွားတစ်ရှူးအတွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဂလင်းကထုတ်လုပ်နေကြပြီးကြောင်းဓါတုဗေဒပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ (ဥပမာ, ဝှေးအတွက်လုပ်ဟော်မုန်း testosterone ဟော်မုန်းတွေဖြစ်တဲ့အသံနဲ့တိုးမြှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်နက်ရှိုင်းအဖြစ်အထီးဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်တာဝန်ရှိသည်) ။ ကင်ဆာရောဂါကုသဟော်မုန်းကုထုံးများအသုံးပြုမှုတချို့အကျိတ်ဆဲလ်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်များမှာဆဲလ်ကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်ဖြစ်ကြောင်းတိကျသောဟော်မုန်းအဘို့အ receptors သောလေ့လာရေးအပေါ်အခြေခံသည်။ ဟော်မုန်းကုထုံးအားဖြင့်အလုပ်မလုပ်; တစ်အချို့သောဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုရပ်တန့်ဟော်မုန်း receptors ပိတ်ဆို့ခြင်း, သို့မဟုတ်အကျိတ်ဆဲလ်ကအသုံးပြုမရနိုငျသောတက်ကြွဟော်မုန်းများအတွက်ဓာတုဗေဒအလားတူအေးဂျင့်အစား။ ဟော်မုန်းကုထုံး၏မတူညီသောအမျိုးအစားများကိုသူတို့ရဲ့ function ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ထိခိုက်ကြောင်းဟော်မုန်းအမျိုးအစားအားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်။
Megestrol acetate တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် progestin (ထိုဟော်မုန်းအဓိကချို့ယွင်းတဲ့လူလုပ်ပုံစံ) ။ ဒါဟာပုံမှန်အီစထိုဂျင်သံသရာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်ဟုသတ္တိလည်းရှိတယ်။ ဒါဟာအီစထိုဂျင်မှီခိုအကျိတ်ဆဲလ်များကိုထဲမှာဆဲလ်ကြီးထွား၏ဆွနှောင့်ယှက်။ အဲဒီမှာလည်းသားအိမ်သည်မြို့ရိုး (endometrium) ၏နံရံအပေါ်အချို့သောတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းငှါထင်နေသည်။
Megestrol acetate ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတိအကျယန္တရားသို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုခန္ဓာကိုယ်အဆီတစ်တိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ, မရှင်းလင်းသည်။ ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အားသာချက်ယူခြင်း, Megestrol acetate လေ့လာပြင်းထန်စာစားချင်စိတ်ကိုအရှုံး (anorexia), ကြွက်သားပိန် (cachexia) နှင့်ကင်ဆာနှင့် AIDS နှင့်ဆက်စပ်ကိုယ်အလေးချိန်ဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ ဘယ်လို megestrol acetate အမှုန့်ကိုအကောင်းဆုံးယူသလဲ?
သင့်ဆရာဝန်များကအမိန့်အတိုင်းဤဆေးပညာ (Megestrol acetate အမှုန့်) ကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျအားပေးပြီးမှအချက်အလက်အားလုံးကိုဖတ်ပါ။ အနီးကပ်အားလုံးညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ။
♦သင်ကောင်းစွာခံစားမိလျှင်ပင်, သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကပြောသည်ပါပြီအတိုင်းဤဆေးပညာ (Megestrol acetate အမှုန့်) ကိုယူထားပါ။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လာမယ့်ဆေးထိုးဘို့အချိန်နီးကပ် အကယ်. ♦သည်လွဲချော်ထိုး skip နှင့်သင့်သာမန်အချိန်ပြန်သွားပါ။
♦တစ်ချိန်တည်းသို့မဟုတ်အပိုဆေးများမှာ2ဆေးများယူမထားပါနဲ့။
4 ။ megestrol acetate အမှုန့်ကိုယူပြီးခင်မှာဘယျအထူးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ?
သငျသညျ megestrol acetate အမှုန့်, ရပ်ဆိုင်းမှု, ဒါမှမဟုတ်စုစည်းရပ်ဆိုင်းမှုအတွက် megestrol acetate အမှုန့်, ဆိုအခြားဆေးဝါးများ, သို့မဟုတ်မလှုပ်မရှားပါဝင်ပစ္စည်းများမဆိုမှမတည့်လျှင်♦သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဝါးပြောပြပါ။ အဆိုပါလှုပ်ရှားပါဝင်ပစ္စည်းများများစာရင်းကိုအဘို့သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကိုမေးပါ။
♦သငျသညျကိုယူပြီးသို့မဟုတ်ယူစီစဉ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုညွှန်းများနှင့် nonprescription ဆေးဝါးများ, ဗီတာမင်, အာဟာရဖြည့်စွက်ခြင်း, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဝါးပြောပြပါ။ ပဋိဇီဝဆေးနှင့် indinavir (Crixivan) ဖော်ပြထားခြင်းရန်သေချာစေပါ။ သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏ဆေးဝါးများ၏ဆေးများကိုချိန်ညှိသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဘို့အဂရုတစိုက်သင်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
သငျသညျရှိသည်သို့မဟုတ်အစဉ်အဆက်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်လေဖြတ်ခြင်း, ဆီးချိုရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်ကျောက်ကပ်သို့မဟုတ်အသည်းရောဂါတစ်သွေးခဲခဲ့ကြပါလျှင်♦သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
♦သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လျှင်, သင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာရန်စီစဉ်, ဒါမှမဟုတ်ရင်သားကင်ဆာ-နို့တိုက်ကျွေးကြသည်။ megestrol acetate အမှုန့်ကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာပါက, ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။ megestrol acetate အမှုန့်သန္ဓေသားကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ သငျသညျ megestrol acetate အမှုန့်ကိုယူပြီးနေစဉ်မဟုတ်ရင်သားကင်ဆာ-feed ကိုလုပ်ပါ။
♦သငျသညျ megestrol acetate အမှုန့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်း (ကာလ) နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်စေခြင်းငှါငါသိ၏သငျ့သညျ။ သို့သျောလညျး, သငျသငျသညျကိုယျဝနျဆောငျမဖွစျနိုငျကွောငျးမယူဆသငျ့သညျ။ ကိုယ်ဝန်တားဆီးဖို့မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းသုံးပါ။
သငျသညျကာလအတွင်းသို့မဟုတ်မကြာမီသင့်ရဲ့ကုသမှုပြီးနောက်, ပါးစပ်တွင်းခွဲစိတ်အပါအဝင်ခွဲစိတ်ကုသမှုရှိခြင်းလျှင်♦, သင်သောဆရာဝန်သို့မဟုတ်သွားဆရာဝန်ကိုပြောပြ megestrol acetate ယူပြီးအမှုန့်။
သင့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျကိုယူပါ။ ပိုကြီးတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်ပမာဏသာရှိသို့မဟုတ်အကြံပြုထက်ပိုရှည်ဘို့ယူမထားပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းတံဆိပ်ပေါ်တွင်လမ်းညွန်ကိုလိုက်နာပါ။
သင်တစ်ဦးထိုးတိုင်းတာမယ့်ရှေ့တော်၌ကောင်းစွာပါးစပ်ရပ်ဆိုင်းမှု (အရည်) ကိုလှုပ်။ အထူးထိုး-တိုင်းတာခြင်းဇွန်းသို့မဟုတ်ဆေးဝါးသောက်သောခွက်, မပုံမှန်အစည်းအဝေးစားပွဲပေါ်မှာဇွန်းနှင့်အတူအရည်ကိုတိုင်းတာပါ။ သင်တစ်ဦးထိုး-တိုင်း device ကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုလျှင်, တဦးတည်းအဘို့သင့်ဆေးဝါးမေးကြည့်ပါ။
မီဂါမြို့ ES မီဂါမြို့ထက် megestrol acetate အမှုန့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအာရုံစူးစိုက်မှုပါရှိသည်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ခွန်အား, ဒါမှမဟုတ် megestrol acetate အမှုန့်အမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်, သင့်သောက်သုံးသောလိုအပ်ချက်များကိုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သင်ဆေးဆိုင်မှာရရှိသောဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကသင့်ရဲ့ဆေးဝါးကိုမေးပါ။
သင့်ရဲ့သောက်သုံးသောလိုအပ်ချက်များကိုသင်ခွဲစိတ်ရှိပါကပြောင်းလဲနေမကောင်းဖြစ်ကြသည်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာရှိပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရောဂါကူးစက်နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ဆေးထိုးသို့မဟုတ်အချိန်ဇယားကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုမပါဘဲမပြောင်းပါနဲ့။ ကွာအစိုဓာတ်နှင့်အပူကနေအခန်းအပူချိန်မှာသိုလှောင်ထားပါတယ်။
6 ။ အသုံး Megestrol acetateတိကျတဲ့လူဦးရေအတွက်အမှုန့်
ကိုယ်ဝန် Category: X ကို [သတိပေးချက်များနှင့်ကွိုတငျကာကှယျမှုမြား (5.2) ကိုကြည့်ပါ] ။ အဘယ်သူမျှမလုံလောက်သောတိရိစ္ဆာန် teratology သတင်းအချက်အလက်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဆေးများမှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ Megestrol acetate အမှုန့်များ၏အနိမ့်ဆေးများနဲ့ကုသကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြွက် (အအကြံပြုလက်တွေ့ထိုး 0.02-ခေါက်) သန္ဓေသားအလေးချိန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကလေးမွေးဖွားအရေအတွက်နှင့်အထီး fetuses ၏လောကတွင်ဆရာမများအတွက်လျှော့ချရေးခဲ့သည်။
Megestrol acetate အမှုန့်လိုအပ်ပါသည်ဆိုပါကအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မွေးကင်းစအပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအတွက်အလားအလာ, သူနာပြုရပ်စဲရပါမည်။
လက်တွေ့ anorexia များ၏ကုသမှု Megestrol acetate မှုန့်လေ့လာမှုများ, cachexia, ဒါမှမဟုတ်အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်အတူလူနာအတွက်တစ်ဦး unexplained သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်သူတို့ကွဲပြားခြားနားအသက်အရွယ်နုပျိုသောလူနာထက်ကိုတုံ့ပြန်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် 65 နှစ်နှင့်အထက်အသက်လူနာလုံလောက်သောနံပါတ်များကိုမပါဝင်ခဲ့ချေ။ အခြားအအစီရင်ခံလက်တွေ့အတွေ့အကြုံကသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်အငယ်လူနာအကြားတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ထုတ်မထားပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာအတှကျအထိုးရွေးချယ်ရေးလျော့နည်းသွား Hepatic, ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်နှလုံး function ကိုအကြီးဖြစ်သောသူအကြိမ်ရေထင်ဟပ်နှင့် concomitant ရောဂါသို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးကုထုံး၏, များသောအားဖြင့်ဆေးထိုးအကွာအဝေး၏အနိမ့်ဆုံးမှာစတင်သတိထားရပါမည်။
Megestrol acetate အမှုန့်သိသိသာသာကျောက်ကပ်အားဖြင့်ပြန်ထွက်သွားသည်ခံရဖို့လူသိများသည်, ဤမူးယစ်ဆေးမှအဆိပ်အတောက်တုံ့ပြန်မှုများ၏အန္တရာယ်ချို့ယွင်းကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုအတူလူနာအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုလူနာကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုယုတ်လျော့ပါပြီဖို့ပိုများပါတယ်သောကြောင့်, စောင့်ရှောက်မှုထိုးရွေးချယ်ရေးအတွက်ယူသင့်ပါတယ်, ထိုသို့ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
Megestrol acetate အမှုန့်ခ်ျအိုင်ဗွီရောဂါကူးစက်ခံရမှုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကန့်သတ်အသုံးပြုမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်အားလုံး 10 အမျိုးသမီးတွေအောင်မြင်မှုများသွေးထွက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Megestrol acetate အမှုန့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်မိန်းမကိုယ်သွေးထွက်သွေးဆောင်ရသောတစ်ဦးချို့ယွင်းသောဆင်းသက်လာသည်။
လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးများအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, ကလေးငယ်များနှင့်အခြားလူများကသူတို့ကိုမပယ်မရှားနိုင်မသေချာစေရန်အထူးနည်းလမ်း၏စွန့်ပစ်ရပါမည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအိမ်သာကဆင်းကဒီဆေးကိုရှင်းလင်းရန်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီအစားသင့်ရဲ့ဆေးဝါးများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုတစ်ဆေးပညာယူ-ပြန်ပရိုဂရမ်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးစကားပြောသို့မဟုတ်သင့်ရပ်ရွာထဲတွင်ယူ-ပြန်အစီအစဉ်များအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်သင့်ဒေသခံအမှိုက်သရိုက် / ပြန်လည်ဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ။ သင်တစ်ဦးယူ-ကျောအစီအစဉ်ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အ www.aasraw.com ရှာပါ။
8 ။ M ကegestrol acetateဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
မီဂါမြို့ (megestrol acetate, USP) ခံတွင်းခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားသောကွောငျ့ရောဂါအစာစားချင်စိတ်များနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုတဲ့အမျိုးသမီးဟော်မုန်းချို့ယွင်းသောဆင်တူတဲ့လူလုပ်ဓါတုဖြစ်ပြီး, အဆင့်မြင့်ရင်သားကင်ဆာနှင့် endometrial ကင်ဆာကုသမှုတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ မီဂါမြို့ယေဘုယျ form မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ မီဂါမြို့၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတို့ပါဝင်သည်:
·လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည် / အလိုဆန္ဒလျော့နည်းသွား
အမြိုးသမီးမြား၏ခန့်မှန်းရခက်အင်္ဂါဇာတ် bleeding.The အကြံပြုအရွယ်ရောက်ပြီးသူကနဦးသောက်သုံးသောအပါအဝင်ရာသီကာလအတွက်အပြောင်းအလဲတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ မီဂါမြို့ခံတွင်းခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား 800 မီလီဂရမ် / နေ့ (20 mL / နေ့) ဖြစ်ပါသည်။ မီဂါမြို့အင်ဆူလင်သို့မဟုတ်ပါးစပ်ဆီးချိုရောဂါဆေးပညာနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ဤဆေးဝါးများ၏ဆိုးကျိုးများလျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါ, သွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ သငျသညျဆီးချိုရောဂါရှိပါကသင်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအပြောင်းအလဲများကိုသတိထားမိလျှင်, သင်၏ဆရာဝန်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နဲ့ဆွေးနွေးချက်စောင့်ကြည့်။ မီဂါမြို့ indinavir, ဒါမှမဟုတ်အင်ဆူလင်သို့မဟုတ်ပါးစပ်ဆီးချိုရောဂါဆေးဝါးများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်ဆရာဝန်သင်အသုံးပြုအားလုံးဆေးဝါးများနှင့်ဖြည့်စွက်ပြောပြပါ။ မီဂါမြို့ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုမရရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသန္ဓေသားမှအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးကိုသုံးနေစဉ်ကလေးမွေးအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ ဤသည်ဆေးရင်သားနို့သို့ရှောက်သွားနိုင်ပြီးတစ်ဦးသူနာပြုမွေးကင်းစကလေးအပေါ်မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများရှိနိုငျတယျ။ ဒီမူးယစ်ဆေးကိုသုံးနေစဉ်ရင်သားကင်ဆာ-နို့တိုက်ကျွေးရေးအကြံပြုသည်မဟုတ်။
ဒီဆေးကိုယူပြီးကျသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏မီဂါမြို့ (megestrol acetate, USP) ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေး Center ကအလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပေါ်ရရှိနိုင်မူးယစ်ဆေးအချက်အလက်များ၏ပြည့်စုံသောအမြင်ပေးပါသည်။
9 ။ အလေးချိန် Gain များအတွက် Megestrol Acetate အသုံးပြုမှုသေသေချာချာစဉ်းစားသင့်
Megestrol acetate (595-33-5) အစာစားချင်စိတ်ပေါ်တဲ့အစွမ်းထက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူတစ်ဦး progestational အေးဂျင့်သည်။ ဒါဟာကနဦးတစ်တားဆေးအေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်; သို့သော်ကိုယ်အလေးချိန်၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခု orexigenic အေးဂျင့်အဖြစ်က၎င်း၏လက်ရှိအသုံးပြုမှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ HIV ပိုး-ဆက်စပ်ပိန်နှင့်အတူလူနာနှင့်ကင်ဆာနှင့်အတူရှိသူများအတွက်အစာစားချင်စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်သိသိသာသာတိုးအတွက် MA ရလဒ်များအုပ်ချုပ်ရေး။ MA လက်ရှိတွင်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA က) အတွက်အတည်ပြု HIV ပိုး-ဆက်စပ်ကိုယ်အလေးချိန်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နှစ်ဦးစလုံးကျန်းမာ, ရပ်ရွာနေသောအဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုအဆောက်အဦ, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တစ်ကြံ့ခိုင်တိုးအတွက် MA ရလဒ်များကို၏အသုံးပြုမှုအတွက်နေထိုင်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်။ အတင်းအဓမ္မကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာသေဆုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီ settings တွေကိုထိုသို့သော MA အဖြစ် orexigenic အေးဂျင့်များအသုံးပြုမှုသည်သင့်လျော်သည်။ အမှန်စင်စစ်, MA ထိုကဲ့သို့သော dronabinol နှင့် eicospentaenoic အက်ဆစ်ကဲ့သို့သောအခြား orexigenic အေးဂျင့်ထက်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ သို့သော်ကင်ဆာသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့်လူနာများအတွက်, အဆီကျောင်းအုပ်ကြီးသို့မဟုတ်အရိုးကြွက်သားသို့မဟုတ်အဆီလွတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများနည်းနည်းတိုးပွားလာသောအတူကိုယ်အလေးချိန်၏တစ်ခုတည်းသောမဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်ပါတယ်။ MA ၏အသုံးပြုမှု၏များစွာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများထဲတွင် Testosterone နဲ့အီစထိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု၏ဖိနှိပ်မှုထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်အတူယောက်ျားအခြားထိရောက်သောအန်ဒရိုဂျင်ဖိနှိပ်ကုသမှု (flutamide, bicalutamide) ၏ဘုံအသုံးမပြုမီ, MA လေ့ကဒီ setting ကိုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်အသက်ကြီးအတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏အနီး-သင်းအဆင့်ဆင့်အတွက် MA ရလဒ်များအသုံးပြုခြင်း။ MA လည်းရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူအမျိုးသမီးအီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ဖိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
JCEM အတွက်ယခုလထုတ်ဝေအဆိုပါလေ့လာမှုတွင် HIV-ဆက်စပ်ပိန်နှင့်အတူလူနာအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်၏ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် Testosterone နဲ့နေ MA ၏ပေါင်းစပ်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကနေ MA အဆီအမြတ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရှိအတိုး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူ, အစာစားချင်စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း, တခါထပ်ပြသသည်။ သို့သျောလညျးအဆီလွတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လည်း HIV ပိုး-ဆက်စပ်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူလူနာအတွက်အလေးချိန်အမြတ်ပေါ်နေ MA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ယခင်စာမေးပွဲဆင်တူဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်စုစုပေါင်းခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်, နှင့်အတူတိုးပွားလာခဲ့သည်။ Mulligan et testosterone ဟော်မုန်းနှိမ်နင်းခဲ့ al.showed နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးအလေးချိန်အမြတ်၏ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်သည် ဖြစ်. , ထို့ပြင်, MA အုပ်ချုပ်ရေးလျော့နည်းသွားလိင်စိတ်ခဲ့သည်။ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုပေါ်နှင့်ပိန်ကြုံသောခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုတိုးပွားလာသောအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုဂရုတစိုက်ဒီလူနာလူဦးရေအတွက် MA အသုံးမပြုခင်စဉ်းစားရပါမည်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက် MA ၏ဤဖိနှိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ HIV ပိုးလူနာပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆုံးရှုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်အနိမ့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်နေသည်။
MA ၏သက်ရောက်မှုကိုရည်မှတ်အဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေတစ်အရေအတွက်ကရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားနဲ့သေသေချာချာစီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်သည်။ အစာစားချင်စိတ်တစ်ခုတိုးတက်မှုများနှင့်အဆီ၏အလေးချိန်မှာတစ်အမြတ် cachexia သို့မဟုတ်အတင်းအဓမ္မကိုယ်အလေးချိန်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်နှစ်လိုဖွယ်ရည်မှန်းချက်များဖြစ်ကြပါလျှင်, MA လက်ရှိရရှိနိုင်သောအများဆုံးဖြစ်ပွား orexigenic အေးဂျင့်တစ်ဦးဖြစ်နေဆဲပင်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှု adrenal ဖိနှိပ်မှုနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု၏ဖိနှိပ်မှုများအတွက်အလားအလာဆန့်ကျင်အလေးချိန်ရမည်ဖြစ်သည်။ သောကြောင့်ယင်း၏ antiandrogen ဂုဏ်သတ္တိများ၏, MA ၏ antianabolic သက်ရောက်မှု testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် ameliorated ကြသည်မဟုတ်။
10 ။ ငါ Megestrol Acetate အကြောင်းကိုသိသင့်အရေးကြီးဆုံးသတင်းအချက်အလက်ဆိုတာဘာလဲအမှုန့်?
Megestrol acetate အမှုန့်တစ်ဦးမွေးသေးသောကလေးထိခိုက်စေသို့မဟုတ်မွေးဖွားချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သငျသညျကိုယျဝနျဆောငျလျှင် megestrol မသုံးပါနဲ့။
သငျသညျ megestrol acetate အမှုန့်ကိုယူခင်မှာသင်ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သွေးခဲတစ်သမိုင်းရှိပါကသင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
သင့်ရဲ့သောက်သုံးသောလိုအပ်ချက်များကိုသင်ခွဲစိတ်ရှိပါကပြောင်းလဲနေမကောင်းဖြစ်ကြသည်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာရှိပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရောဂါကူးစက်နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ဆေးထိုးသို့မဟုတ်အချိန်ဇယားကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုမပါဘဲမပြောင်းပါနဲ့။
မီဂါမြို့ ES မီဂါမြို့ထက် megestrol acetate အမှုန့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအာရုံစူးစိုက်မှုပါရှိသည်။ သင်ဆေးဆိုင်မှာရရှိသောဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကသင့်ရဲ့ဆေးဝါးကိုမေးပါ။
11 ။ ငါ Megestrol Acetate အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘယ်မှာရနိုင်မလဲ?
♣အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Megace®, Megace® ES
Tags: Megestrol acetate အမှုန့်ကိုဝယ်, Megestrol acetate အမှုန့်
354 Views စာ
ဘယ်လိုအများကြီး 4-DHEA testosterone သို့ပြောင်းလာ? စမ်းသပ်ဆဲဆေးဝါး J147 (1146963-51-0) အယ်လ်ဇိုင်းမားအို